कोक पिएपछि १ घण्टासम्म शरीरभित्र हुन्छ यस्तो उथलपुथल !
सफ्ट ड्रिंकसँग सम्बन्धित एक खबरले पूरा विश्वमा नै खलबली मच्चाइदिएको छ । ब्रिटेनका पूर्व फर्मासिस्ट नीरज नाइकले ‘दी रेनिगेड फर्मासिस्ट’ शीर्षकमा एउट ब्लग लेख्दै सफ्ट ड्रिंक पिएको एक घण्टाभित्र शरीरमा हुने तमाम प्रभावहरु सबैको सामने ल्याएका छन् ।
यस ब्लगमा गउनले कोकाकोला पिएको १ घण्टाभित्र शरीरमा के-के प्रभाव पर्छ भन्ने प्रष्ट पारेका छन् । सोशल साइटहरुमा यो जानकारी भाइरल नै बनेको छ । डेलीमेलका अनुसर निरज नाइकले एक ग्राफिक्सको माध्यमबाट प्रष्ट पारेका छन् कि कोकाकोलाले आवश्यक खनिज तत्वहरुलाई कसरी शरीरबाट अलग गर्छ । साथै शारीरिक र मानसिक रुपमा पनि मानिसलाई बदलिदिन्छ ।
पहिलो १० मिनेट: यो अवधिमा तपाईंको शरीर भित्र करीब १० चम्चा चिनी पस्दछ । जुन मात्रा तपाईंलाई चाहिने दैनिक आवश्यकता बराबर हो । तर, यति धेरै चिनी एकै पटक खाँदा तपाईंलाई वाकवाकी लाग्नुपर्ने हो । तर, कोकमा रहेको फस्फोरिक एसिडले यसलाई सन्तुलनमा राखेको हुन्छ, त्यसैले भोमिट हुँदैन ।
बीस मिनेट: तपाईंको रगतमा चिनीको मात्रा बढ्दछ । जसले इन्सुलिन सक्रिय हुन्छ । यो अवधिमा कलेजोले प्राप्त गरेको सबै सुगरलाई बोसोमा बदलिदिन्छ ।
चालीस मिनेट: चालिस मिनेटमा पेय पदार्थमा भएको सबै क्याफिनलाई शरीरले लिन्छ । यस अवधिमा आँखा रसिलो हुने र रक्तचाप बढ्ने हुनाले रक्तसञ्चारमा कलेजोले सुगरको मात्रा थपिदिन्छ । दिमागमा रहेका निद्रा लाग्ने रिसेप्टरहरु बन्द हुन्छन् जसले निदाउन दिँदैन ।
पैँतालिस मिनेट: कोकाकोला पिएको ४५ मिनेटपछि डोपामाइनमा वृद्धि हुन्छ र आनन्द महसुस हुन्छ, जुन प्रकारको आनन्द लागु औषध प्रयोग गर्दा हुनेगर्छ ।
यो चरणमा फस्फोरिक एसिडले क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र जिङ्कलाई तपाईको तल्लो आन्द्रामा एकीकृत गर्दछ जसले गर्दा शरीरको मेटावोलिजम वा रासायनिक प्रक्रिया उच्च हुन्छ । यति बेला सुगरको मात्रा पनि बढी हुने र पिसाबबाट क्याल्सियम निकै जाने खतरा हुन्छ ।
साथै क्याफिनमा भएको पिसाब बढाउने तत्व सक्रिय हुन्छ जसले गर्दा तपाईलाई पिसाव लागेको महसुस हुन्छ । अनि हाडतिर जान लागेको क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, सोडियम, इलेक्ट्रोलाइट र पानी शरीरले बाहिर फ्याँक्दछ । सोच्नुस् यस्तो हुँदा तपाईंलाई कति नोक्सान पुग्ला ?
र, कोक पिएको एक घण्टाको अवधि यसको तिब्र असरको अन्तिम चरण हो । यो अवधिमा यसको प्रभाव कम हुँदै जान्छ अनि सुगरको मात्रामा कमी हुँदैजान्छ ।
यो त तत्कालीन असर भयो । दीर्घकालीन रुपमा पनि यसले तपाईंलाई असर पुर्‍याउँछ ।